ABC Baby Wipes Light Fragrance - 80 sheets – SUNNY eSTORE
ABC Baby Wipes Light Fragrance - 80 s...
ABC Baby Wipes Light Fragrance - 80 sheets
ABC Family CareSKU: 8938503104159
ABC Babyjoy မှ အသစ်ထပ်မံ တင်သွင်းထားတဲ့ Baby Wipes လေးတွေကို ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီနော်
ကိုယ့်ကလေးအညစ်အကြေးတွေပေနေတဲ့အခါ အနားမှာရှိတဲ့ အဝတ်စနဲ့ သုတ်နေတုန်းပဲလား ?
ဟိုတစ်ရှူး ဒီတစ်ရှူးတွေနဲ့ သုတ်နေတုန်းပဲလား ?
ဒါဆိုရင် အခု ဖေဖေ မေမေတို့အတွက်
ABC Babjoy အမှတ်တံဆိပ် Baby Wipes လေးတွေ ဝယ်လို့ရနေပါပြီနော် ..
ဗီတာမင်အီးပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အသားအရည်ကိုနူးညံစေတယ်အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အထူးအထောက်အကူပြုယုံသာမက ရှားစောင်းလက်ပတ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့် အရေပြားပြဿနာတွေကင်းဝေးစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Alcohol free ဖြစ်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အပြင် Skin moisturizer ပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ရဲ့အရေပြားအစိုဓါတ်ကိုထိမ်းထားပေးနိုင်လို့ အရေပြားခြောက်တာ ကွဲတာ တွေမဖြစ်တော့ဘူးနော်။ ကလေးတွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ Fragrance ရနံ့ ရေမွှေးရနံ့တွေမထည့်ထားလို့ စိတ်ချရတယ်နော်။ ဒါ့အပြင်စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေက သတ်မှတ်ထားတဲ့မူအရ ABC Babyjoy baby wipes လေးမှာ မြန်မာလို အသုံးပြုပုံပြုနည်းလမ်းညွှန်လေးလည်းပါတာမို့ ဖေဖေ မေမေတို့အတွက် အထူးပဲ အဆင်ပြေစေမှာပါ နော် ။
တစ်ထုပ်မှာ အရွက် ၈၀ တောင်ပါတယ် ဝိုး... အခုပဲဝယ်လိုက်ကြပါစို့ !!
USA Product ဖြစ်ပြီး Vietnam တွင်ထုတ်လုပ်ပါသည် ။
Anti Baterial Alcohol Free
WIPES SIZE -200mm x 150mm
PACK SIZE -80pcs/Pack